Madaxda Warfaafinta XFS oo diray hambalyo ku aadan Xuska 21-ka Janaayo | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Madaxda Warfaafinta XFS oo diray hambalyo ku aadan Xuska 21-ka Janaayo
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta C/laahi Xayir Ducaale ayaa manta dhambaal hambalyo ah oo ku aadan xuska sanadguurada 49-aad ee ka soo wareegatay aasaaska maalinta saxaafadda Soomaaliya,aawadeed dhambaal hambalyo ah u diray dhammaan shaqaalaha warbaahinta dalka,gaar ahaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta meel kasta oo ay joogaan.
Agaasimaha Guud oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay burburkii guud ahaan ku dhacay dalka,raadadkii uu ku reebay bulshada iyo saameynta uu ku yeeshay qeybaha saxaafadda ee soomaaliya.
C/laahi Xayir Ducaale waxa uu ku baaqay in qeybaha warbaahinta ay dadka u gudbuuyaan barnaamijyo nabadeed iyo kuwo wax u taraya bulshada,isla markaana laga fogaado wixii dhaawacaya dhismaha iyo nabadda dalka.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta C/laahi Xayir Ducaale , waxa uu xusay in dalka uu xilligaan ku jiro xaalad soo kabasho ah,isla markaana ay haatan socdaan dib u dhis iyo horumar baaxad leh,sidaa daraadeed,waxa uu ka codsaday qeybaha warbaahinta in dalka ay ugu adeegaan si daacadnimo ah oo ay ku jirto danta dadka iyo dalka.
Gabagabadii Agaasimaha Guud, waxa uu u rajeeyay shaqaalaha warbaahinta dalka,gaar ahaan wasaaradda warfaafinta in sanadkaan kiisa kale ay ku gaaraan guul iyo barwaaqo
Previous articleSafiirka J.F.S ee Masar oo Xafiiska ku qaabilay Wasiirka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta XFS.
Next articleSoomaaliya iyo IMF oo ka hadlay Arrimo la xiriiray deyn cafinta dalka